QM oo kordhinaysa Tageerada Somaaliya – Radio Daljir
Febraayo 26, 2018 9:06 b 0
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay kordhineyso taageerada sahayda iyo lacagaha isugu jirta ee ay siiso Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya qeybahooda kala duwan.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in Hay’adda ay ka go’an tahay taageerada Soomaaliya, si wax badan looga qabto la dagaallanka argagixisanimada.
Madaxda Qaranka Soomaaliya ayuu sheegay mar walba in ay ku fakarayaan oo ay ku dadaalayaan sidii ay uga guuleysan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan ururka Al-shabaab, si loo helo nabad iyo xasilooni.
Rag ka tirsanaa Shabaab ayaa weerar Rasaas ku bilowday oo watay laba qarax waxa ay la beegsadeen meel ku dhow Madaxtooyada Soomaaliya iyo Hotelka Dorbin oo ku yaalla Agagaarka Isgoyska Jubba, waxayna qaraxyadaasi dileen dad ka badan 20 qof oo isugu jira Rayid iyo Askar.
Turkiga Masuuliyin kasocda oo Booqday degaanka Goobweyn (Sawiro)